2 Samuel 1 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
1 O wee ruo mgbe Sọl nwụsịrị, mgbe Devid si n’igbu ndị Amalek lọta,+ na Devid nọrọ ụbọchị abụọ na Ziklag.+
2 O wee ruo na n’ụbọchị nke atọ, lee! otu nwoke+ si n’ebe ndị agha Sọl mara ụlọikwuu na-abịa, o yi uwe dọwara adọwa,+ o kpokwasịkwara onwe ya ájá n’isi;+ o wee ruo na mgbe ọ bịakwutere Devid, ọ dara n’ala+ ozugbo wee kpọọ isiala.
3 Devid wee sị ya: “Olee ebe i si?” o wee sị ya: “Ọ bụ n’ebe ndị agha Izrel mara ụlọikwuu ka m si gbapụta.”
4 Devid wee sị ya: “Olee otú ihe si gaa? Biko, kọọrọ m.” O wee sị: “Ndị Izrel esiwo n’ọgbọ agha gbaa ọsọ, ọtụtụ n’ime ha adawokwa nwụọ,+ ọbụna Sọl+ na Jọnatan+ nwa ya anwụwo.”
5 Devid wee sị nwa okorobịa ahụ na-akọrọ ya ihe ahụ: “Olee otú i si mara n’ezie na Sọl na Jọnatan nwa ya anwụwo?”+
6 Nwa okorobịa ahụ na-akọrọ ya ihe ahụ wee sị: “Ọ dabara na m nọ n’Ugwu Gilboa,+ lee, Sọl dabeere n’ube ya;+ ma, lee! ndị na-anya ụgbọ ịnyịnya na ndị nọ n’elu ịnyịnya chụkwutere ya.+
7 Mgbe ọ tụgharịrị hụ m, ọ kpọrọ m, m wee sị, ‘Lee m!’
8 O wee sị m, ‘Ị̀ bụ onye?’ m wee sị ya, ‘Abụ m onye Amalek.’+
9 O wee sị, ‘Biko, guzo n’akụkụ m gbuo m, n’ihi na anọ m n’oké ihe mgbu, n’ihi na mkpụrụ obi m dum+ ka dị n’ime m.’
10 M wee guzo n’akụkụ ya gbuo ya,+ n’ihi na m maara na ọ gaghị adị ndụ mgbe ọ dasịrị. M wee were okpueze+ o kpu n’isi na ọla aka ọ gba n’aka, ka m wee chịtara ha onyenwe m n’ebe a.”
11 Devid wee jide uwe ya dọwaa,+ otú ahụkwa ka ndị ikom niile ya na ha nọ mere.
12 Ha wee malite iti mkpu arịrị na ịkwa ákwá+ na ibu ọnụ+ ruo anyasị n’ihi Sọl nakwa n’ihi Jọnatan nwa ya nakwa n’ihi ndị Jehova nakwa n’ihi ụlọ Izrel,+ n’ihi na e jiriwo mma agha gbuo ha.
13 Devid wee sị nwa okorobịa ahụ kọọrọ ya ihe ahụ: “Olee ebe i si?” o wee zaa, sị: “Abụ m nwa onye mbịarambịa, onye Amalek.”+
14 Devid wee sị ya: “Gịnị mere na ị tụghị egwu+ isetị aka gị laa onye Jehova tere mmanụ+ n’iyi?”
15 Devid wee kpọọ otu n’ime ụmụ okorobịa ya wee sị: “Gakwuru ya. Gbuo ya.” O wee gbuo ya.+
16 Devid wee sị ya: “Ka ọbara gị dị gị n’isi,+ n’ihi na ọnụ gị agbagidewo gị akaebe,+ sị, ‘Ọ bụ m gburu onye Jehova tere mmanụ.’”+
17 Devid wee bụọ abụ iru uju+ a n’ihi Sọl na Jọnatan nwa ya+
18 wee sị ka a kụziere ndị Juda+ abụ iru uju a nke a na-akpọ “Ụta.”+ Lee! E dere ya n’akwụkwọ Jesha,+ sị:
19 “E gbuwo ịma mma gị, Izrel, n’ebe gị ndị dị elu.+
Lee ka ndị dike si daa!
20 Unu akọla akụkọ ya n’ime Gat;+
Unu akọsala ya n’okporo ámá Ashkelọn,+
Ka ụmụ nwaanyị ndị Filistia ghara ịṅụrị ọṅụ,
Ka ụmụ nwaanyị nke ndị a na-ebighị úgwù ghara inwe obi ụtọ.+
21 Unu ugwu ndị dị na Gilboa,+ ka igirigi ghara ịdakwasị unu, ka mmiri ozuzo ghara izokwasị unu, ka ubi unu gharakwa imepụta onyinye dị nsọ;+
N’ihi na n’ebe ahụ ka e merụrụ ọta ndị dike,
Ọta Sọl, nke mere na e nwekwaghị onye e tere mmanụ.+
22 Ụta Jọnatan esighị n’ọbara ndị e gburu egbu,
Nakwa n’abụba ndị dike laghachi azụ,+
Mma agha Sọl adịghịkwa alaghachi n’efu.+
23 Sọl na Jọnatan,+ ndị a hụrụ n’anya, ndị bụkwa ndị ọma n’oge ha dị ndụ,
E kewaghịkwa ha n’ọnwụ.+
Ha na-efe ọsọ karịa ugo,+
Ha dị ike karịa ọdụm.+
24 Unu ụmụ nwaanyị Izrel, kwaaranụ Sọl ákwá,
Onye yiwere unu uwe uhie a chọrọ mma,
Onye tinyere ihe ịchọ mma ọlaedo n’uwe unu.+
25 Lee ka ndị dike si daa n’ọgbọ agha!+
Lee ka e si gbuo Jọnatan n’ebe ndị dị elu unu!+
26 M na-enwe mwute n’ihi gị, nwanne m Jọnatan,
Ị dị m mma nke ukwuu.+
Ịhụnanya i nwere n’ebe m nọ dị ukwuu karịa ịhụnanya ndị inyom.+
27 Lee ka ndị dike si daa,+
Ngwá agha alaakwa n’iyi!”
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D10%26Chapter%3D1%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl